विजय शाहीः कति फेक, कति सही ?
कतिसम्म भने उनको प्रतिभाको आधारमा अनेक मिम बनिरहेका छन्, उनलाई प्रोत्साहन गरेर होस् या उडाएर नै किन नहोस्, मानिसहरुले उनीमाथि भिडियो बनाइरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले लागौँ, कालिकोटका विजय शाही कसरी चर्चामा आए भन्ने विषयमा ।
बिर्सनु हुँदैन, सागर भुजीले यो रेकर्ड गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्समा नै दर्ता गराएका हुन् । तर, विजयले अहिलेसम्म गिनिजमा नाम लेखेका छैनन् । उनले यो रेकर्ड ब्रेक गरे पछि च्याम्पियन बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्समा चाहिँ नाम लेखाएका हुन् ।
जब यो कुरा युट्युबबाट बाहिर आयो, तब सबैले विजयको क्षमतालाई प्रशंसा मात्र गरेनन्, उनलाई फलो गर्नेहरु पनि बढ्न थाले ।
शाहीको चर्चा बढेसँगै पत्रकार ऋषि धमालाले पनि उनलाई ४ साउनमा कार्यक्रममा बोलाए । धमालाको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा शाहीले ३ मिनेटमा महाभारत र ५ मिनेटमा नेपाली शब्दकोष पढेर कण्ठ गरेको भनियो । हुन पनि टिभीमा देखाइएको कार्यक्रममा शाहीले केही समयमा नै यी दुई पुस्तक कन्ठस्थ गरेका थिए ।
६ साउनमा शाहीलाई फेरि रिपोर्टस् क्लबमा लगियो ।
त्यहाँ उनलाई केही व्यक्तिहरुले केही किताब दिए र त्यसलाई पढ्न लगाए । तर, शाहीले मानेनन् । यसअघि शाहीमाथि आलोचना हुन थालिसकेको थियो, अब यो आलोचनाको झिल्को झन् बढ्न थाल्यो ।
अब विजय शाहीको विषयमा नेपालमा मनोक्रान्ति अभियान चलाएर चर्चित बनेका योगी विकाशानन्दले के प्रतिक्रिया दिएका छन् भन्नेबारे हेरौँ । यो विषयमा विकाशानन्दको विचार र एनलाइसिस किन महत्वपूर्ण छ भने उनले केही समयअघिदेखि नेपालमा स्मरणशक्ति बढाउने उपाय भन्दै केही सेमिनार चलाएका छन्, केही पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनले आफ्नो यो अभियानलाई सुपर लर्निङ मेथड नाम दिएका छन् ।
तिनै विकाशानन्दले विजय शाहीमाथि एउटा भिडियो बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका छन् ।
त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘विजय भाइले पुरुषार्थ त देखाएकै हुन् तर उनी इमान्दार भएनन् कि भन्ने मेरो प्रश्न हो ।’
विकाशानन्दले विजय शाहीको इमान्दारीको प्रश्न उठाउनुको कारण एउटै हो– शाहीले यसरी आफूले सम्झिने कुरा आफैं प्रतिपादन गरेको भनेर केही मिडियाको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।
तर, बिर्सनु हुँदैन, शाहीले गरेजस्तो स्मरणशक्तिको क्षमता प्रदर्शन यसअघि अमेरिकाका हावार्ड बर्गले गरेका थिए । उनले एक मिनेटमा २५ हजार शब्द र ४ मिनेटमा एक लाख शब्द याद गरेर रेकर्ड बनाएका थिए ।
तर, यो प्रविधि र सिद्धान्तको प्रतिपादक पनि हावार्ड बर्ग चाहिँ होइनन् ।
यसको विकास त सबैभन्दा पहिले जापानकी एक महिलाले गरेकी रहिछिन् । युमिका नाम गरेकी यी महिला शिक्षिका हुन् । उनले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई छिटो स्मरण गराउन सहयोग गर्दै गर्दा एक विद्यार्थीले उनलाई नै चकित बनाइदिएका रहेछन् । ८ वर्षका ती बालकले पाना पल्टाउँदै त्यहाँ लेखिएको सबै कन्ठ सुनाएका रहेछन् ।
अनि यो विधिलाई युमिकाले थप अध्ययन गरेकी हुन् । युमिकाले ती बालकलाई सोधेकी रहेछिन्– कसरी यस्तो सम्भव भयो ?
ती विद्यार्थीले जवाफ दिएछन्– मैले पुस्तकका शब्दहरुलाई चित्र बनाएर आफ्नो दिमागमा कैद गरेको हुँ ।
युमिकाले यही लर्निङ प्रोसेसलाई थप अगाडि बढाएर धेरैलाई सिकाइछन् ।
अनि यो विधि हो– क्वान्ट स्पिड रिडिङ थ्योरी ।
यही विधिलाई प्रयोग गरेका हुनसक्छन्, विजयले । खैर, उनले अहिले जे गरेर देखाएका छन्, त्यो पक्कै पनि प्रशंसाको कुरा चाहिँ हो ।